Siyaasigii Somalilnad u gacan geliyey Laascaanood oo u galay Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Siyaasiga Axmad Cabdi Xaabsade oo muddooyinkii u dambeeyey ka tirsanaa maamulka Somaliland, horayna xilal kala duwan uga soo qabtay maamulka Puntland ayaa xalay gaarey degmada Galdogob ee gobolka Mudug.
Waxaa la filayaa in Xaabsade maanta oo Axad ah uu tago magaalada Gaalkacayo, halkaasoo sida loo badinayo uu uga soo kicitimi doono magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland.
Dadka ka faallooda siyaasadda gobolka ayaa siyaabo kala duwan u fasiray soo laabashada Xaabsade. Badi dadku waxay afka ku hayaan in tallaabadani ay caddeyn u tahay in Xaabsade uu dib mar kale Puntland ugu soo noqday.
Madaxweynaha Puntland ee xilligan, C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa u fidiyey gogol nabadeed madax-dhaqameedka, siyaasiyiinta iyo waxgaradka beelaha dega gobollada Sool iyo Cayn.
Waxaa la sugayaa wax uu ku hadlo Maxamed Cabdi Xaabsade, waxaase loo badinayaa inuu yahay nin qey ka qaadan kara dib usoo celinta magaalada Laascaanood, iyadoo madaxweynaha Puntland C/weli Gaas uu horay u sheegay in Laascaanood xoog lagu qabsaday ayna tahay in qaabkaas lagu soo celiyo.
← The Last Pagans of Iraq → Gudoomiyaha maxkamada ciidamada ee gobolka Bari oo ka badbaaday iskuday dil